Imibuzo kubuya obekuthiwa uminzile | Isolezwe
Imibuzo kubuya obekuthiwa uminzile
Isolezwe / 25 January 2013, 10:20am / NOKUBONGWA PHENYANE
24/01/13 DURBAN: UMNZ BERNARD Mathebula ongubaba womntwana obekade elahlekile osetholakele uthi akagculisekile ngesimo somntwana njengoba isigula ithi inenyoka esiswini. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
USELE nemibuzo umndeni womfana obese kuphele izinsuku eziyisishagalolunye aduka ekhaya obekusolwa ukuthi uminze emfuleni uGobhogobho, eNtuzuma.
Umndeni ushaqeke kwaphela nasozwaneni ngesikhathi ubona lo mfana onguLindani Dlamini (12) efika nowesilisa ongumhlengikazi kulesi sibhedlela. UMnuz Wandile Chamane, othe udluliselwe kuye ngosohlalakahle basesibhedlela iMahatma Ghandhi ngoba bazi ukuthi uhlala eNtuzuma okungenzeka akwazi ukuthola umndeni wakhe.
UMnuz Bernard Mathebula uyise walo mfana obedukile uthi uhluleke nawukuzibamba wakhala ebona indodana yakhe abecabanga ukuthi ishonile ifika ekhaya ngoLwesithathu ntambama.
Umndeni walo mfana bese uhambele izangoma nabantu ababonayo ngoba ukholwa ukuthi lo mfana ngeke esatholakala.
“Siyajabula impela ingane ibuyile kodwa ngendlela efike ngayo isishiya sinemibuzo ukuthi ibikuphi ngoba nayo ayichazi kahle futhi ilimele, nasebusuku asilalanga ithuka ithi kukhona izinto eziyihamba esiswini,” kusho uMathebula.
Echaza uMathebula uthe bebephuma emfuleni beyokudla ngesikhathi kuqhamuka indodana yakhe ihamba nalo wesilisa ozibize ngoChamane othe ulethe ingane.
“Uthe uLindani umnikwe osonhlalakahle bathi ngoba owaseNtuzuma basacela abafunele umndeni wakhe awudlulisele kuwo. Ufike nenye ingane ethe imbone edilika nalo mlisa etekisini wamtshela ukuthi uyafuneka kubo njengoba eseze waphuma nasemaphepheni,” kuchaza uMathebula.
UMnuz Chamane utshele Isolezwe ukuthi ungunesi kulesi sibhedlela. Uthe uLindani wafika nabezimo eziphuthumayo kwathiwa utholwe equlekile emgwaqweni wahanjiswa esibhedlela.
“Iyona ingane ezisholo ukuthi kukuphi kubo njengoba osonhlalakahle bebesazophuma beyofuna umndeni wayo. Mina bangicele ukuthi ngidlule ngiyishiye kubo njengoba ibisishilo ukuthi kukuphi ngayithatha nami ngoba kuseduzane nala ngihlala khona,” kuchaza uChamane.
Uyise wengane uthe basazama ukuthi indodana ibuyele esimeni esejwayelekile njengoba igula nje.